Abavelisi boMbane abaNgena kwi-Elevator
Inkqubo yokulawula isixhobo se-Escalator
Umsebenzi wokulawulwa kombane Kukho iindlela ezimbini. Imodeli yokuqala yimodeli eqhelekileyo, kwaye indlela yesibini yindlela yokugcina. Yindlela eqhelekileyo xa zonke iiplagi ezingalungisi kwigumbi elingaphezulu nangaphantsi komatshini zifakiwe. I-escalator iqalile ukuthenga abasebenzi ngesitshixo xa kungekho mntu kuyo. Abasebenzi bacinezela iqhosha lokumisa ukuze bame kwi-escalator. Xa umqondiso oyintloko ufunyenwe, uqalile kwaye uqhutywa ngesantya esinexabiso. Thulula enye yeeplagi ezingalungisi kwaye ufake ibhokisi yokulungisa kulungiso ...
Ifoto yesiza somhlangano we-Escalator
Ifoto yesiza se-Escalator
Umsebenzi we-Escalator oSebenzayo luhlobo lwesixhobo esiqhubekayo esiqhutywa sisixhobo somdibaniso wesakhiwo esikhethekileyo kunye nebhanti elihambisa izinto ezithile. Inezinto ezininzi ezinokubaluleka njengezithuthi ezikhulu, ngokuqhubekeka nezithuthi. Ke imfuneko yokhuseleko iphezulu kunezinye izixhobo. Isetyenziselwa kwiindawo zikawonke-wonke ngokuhamba kwabantu okuhlanganisiweyo, ezinje ngeevenkile ezinkulu, iiklabhu, izitishi, izikhululo zeenqwelomoya kunye neenqwelomoya. Ulwakhiwo Eyona drive inokwanela ...
Umsebenzi we-Escalator oSebenzayo luhlobo lwesixhobo esiqhubekayo esiqhutywa sisixhobo somdibaniso wesakhiwo esikhethekileyo kunye nebhanti elihambisa izinto ezithile. Inezinto ezininzi ezinokubaluleka njengezithuthi ezikhulu, ngokuqhubekeka nezithuthi. Ke imfuneko yokhuseleko iphezulu kunezinye izixhobo. Isetyenziselwa kwiindawo zikawonke-wonke ngokuhamba kwabantu okuhlanganisiweyo, ezinje ngeevenkile ezinkulu, iiklabhu, izitishi, izikhululo zeenqwelomoya kunye neenqwelomoya. Ulwakhiwo Eyona drive yanele ...
Isixhobo sokubambisa seenqwelo moya zesithuthi
Ukuchaneka okuphezulu, iziko lokuzinza okuphezulu, ukuguquguquka okuphezulu. Ukusetyenziswa kobude obuqhelekileyo bokulinganisa kunye nomlinganiso obunjiweyo we-U wenza idatha ichaneke ngakumbi. Imoto ye-gantry ilawulwa yiJapan Panasonic servo motor, ezinokuzinza okuphezulu. Usebenzisa isistim ephambili yokudibanisa, iphaneli yokulawula isikrini sokuthinta imveliso, ukusebenza kulula kwaye kuthembekile. Idatha yokulinganisa, njl. Njl inokugcinwa ngokuzenzekelayo kwindawo yedatha ukulungiselela ukuvela kombuzo wedatha kunye nokulandelela kwemveliso.